Efa vory lanona teo ny mpitandro filaminana omaly ary nalefa halina izy. Notanana tao amin'ny tranompatin'ny hopitaly ity farany nanatanterahana ny fitiliana, araka ny lalàna velona, indrindra iraisam-pirenena. Ny fampitam-baovao hatrany no nilaza fa zotra tsy maintsy narahina ny fitiliana faty toy izao saingy voamarina ny vinavinan'ny mpanara-baovao fa nandamoka ny fizahana faty na "autopsie".
Tsy nisy zava-baovao hita manoloana ireo sisan-taolan’i Alana Cutland efa niparitaka tanteraka. Ny vaovao ofisialin'ny mpitandro filaminana ihany koa efa nanamafy fa na fony tsy mbola tazana aza ny razana, vokatry ny fahadisoam-panantenany noho ny tsy fahombiazan'ny fikarohany no nampamoifo azy ka nahatonga ireo fianakaviany nanankina azy tamina teratany britanika vavy iray. Efa nidongy tsy nisakafo izy indray andro mialoha ary nitsambikina teny ambony fiaramanidina.